🥇 ▷ Gaar ah: Huawei Mate X isku laabma wuxuu yeelan doonaa Kirin 990 chipset cusub ✅
Gaar ah: Huawei Mate X isku laabma wuxuu yeelan doonaa Kirin 990 chipset cusub
Taasi Huawei Mate X dhab ahaantii, waxay xirxiraysaa Kirin 990 chip, TechRadar waxay wax ku barataa iyadoo ay hoos imaaneyso Huawei magaalada New York.
Yanmin Wang, madaxweynaha CEE, Nordic iyo Canadian Territory ee Kooxda Ganacsiga Macaamiisha Huawei, waxay u xaqiijisay TechRadar in shirkadda Kirin 990 chip ay joogi doonto qeybta labaad, Huawei Mate X.
“Haa,” ayuu yidhi Wang, “isagu mar dhow ayuu halkan imaan doonaa.” TechRadar waxay horey u ogaatay in Mate X uusan bilaabi doonin bisha Sebtember, taariikhda la siidaayana dib ayaa loo dhigi doonaa ilaa November. Xitaa iyada oo la raacayo warkan, dhowr luqadood oo rasmi ah oo Huawei ah ayaa wali sheegta Sebtember.
Ku soo noqo MWC, markii taleefanka gacantu markii ugu horreysay la shaaciyay, Huawei wuxuu sheegay inay la imaan doonto Kirin 980 chipset oo markii ugu horreysay laga dooday Huawei Mate 20 ee Oktoobar 2018.
Si kale haddii loo dhigo, waxay macno u leedahay in kareemada ugu dambeeyay ee shirkadda ay kujirto processor-ka ugu awoodda badan ee ay yeelan karto. Marka la eego Huawei xawaaraha furitaanka xawaaraha, waan fileynaa Huawei Mate 30 si loo bilaabo Kirin 990 sidoo kale, isla markaana waxay u badan tahay inay ku dhacdo iyada oo aan la xaqiijin Huawei P40.
Huawei ayaa markii hore u sheegtay TechRadar in Mate X laga yaabo inuu soo baxo horaanta bisha Juunyo 2019, markaa taariikhda sii deynta ayaa dib loo riixay bisha Sebtember, oo hadda waxaa naloo sheegay inaan filayno bisha November.
Sababaha tani waa kala duwan yihiin: Waxaan ognahay in dhuumaaleyntu waxyar ka soo hagaagtay nooca raacaya qaabkii lagu muujiyey MWC 2019 bishii Maarso, laakiin marka la eego sida ay u yar tahay shabakadda 5G ee la dhisay, Huawei si dhakhso leh ugama deg degin inay damiso. taleefanka.
Taasi waa sababta oo ah, si aan qarsoodi ahayn, Kirin 990 wuxuu taageeraa 5G, oo leh a-chip 5G modem, Wang wuxuu u sheegay TechRadar. Taasi waa sida kumbiyuutarrada combooni-ka ee loo yaqaan ‘Snapdragon 855 iyo’ Snapdragon 850 combo modem.
Kirin 990 iyo 5G
A HuaweiCentral Warbixinta ayaa xaqiijineysa in Huawei ay daaha ka qaadi doonto labo ka mid ah Kirin 990 procestors at IFA 2019: processor-ka ugu weyn iyo 5G la jaan qaadi kara. Laakiin TechRadar waxay maqashay oo keliya wax ku saabsan chipset 5G la jaan qaada.
Kirin 990 ayaa loo cabbiri doonaa 7nm iyadoo la adeegsanaayo awood yar oo ka hooseysa Kirin 980 waxayna taageerta dhammaan qaababka “caadiga ah” 5G, ayuu yiri Wang. Laakiin ma cadda haddii ay kujirto mowjadaha milimitir-ka-jeer-ka-dheereeya laga bilaabo 30 GHz illaa 300 GHz (oo ah shabakadaha ugu badan ee 5G ee Mareykanka) iyo Qaababka soo noqnoqda ee hooseeya sida sub-6, oo guud ahaan aan bixin xawaare deg deg ah laakiin leh goobo caymis badan.
Shiinaha ayaa ku kharash gareeyay $ 180 bilyan shantii sano ee la soo dhaafey kuna rakibay ku dhawaad ​​350,000 saldhigyo shaqeynaya, sida ku xusan Abriil 2019. Warbixinta IEEEWaxaan runtii jeclaa bandhiga 3 iyo 4 Low GHz band – oo si kale loo dhigo, sub-6. Ma cadda illaa iyo imminka kaabayaasha Huawei ay dhistay, in kasta oo Huawei ay ku sheegtay bayaankeeda in ay leedahay ilaa 50% saamiyada qalabka 5G ee dalka ay wadaagaan South China Morning Post.
Ergo, wali ma ogin in bandowga “caadiga ah” 5G ee uu Mate X ku taageeri doono uu la shaqeyn doono mmWave iyo sub-6 – in kasta oo ugu yaraan ay la shaqeyn doonto kan dambe marka loo eego awooddeeda suuqa casriga ah ee Shiinaha (38% gudaha rubucii labaad ee sanadka 2019, by Reuters)
Ka sokow Mate X, Kirin 990 wuxuu ku dhufan doonaa taleefanka gacanta ee Huawei dhamaadka sanadka 2020, ayuu yiri Wang. Miyay taasi ku jirtaa taleefannada jiilka dambe ee sharafta, kuwaas oo dhaqan ahaan u soo qaatay kaamirooyinka Kirin ee ugu dambeeyay? Iyo, dabcan, haddii ay la jaan qaadi doonaan 5G, Wang wuxuu yiri: “Malaha. Wax kasta ayaa dhici kara ”.